Kpido: pịa-thru ọnụego | Martech Zone
GetResponse etinyela otu infographic na mkpokọta mmetụta nke mmekọrịta mmadụ na ibe na email ịpị-ọnụego… na nsonaazụ ndị mara mma. Onu ogugu ndi oru ndi gunyere bọtịnụ ikesa mmekọrịta na ozi ịntanetị ha sitere na 18.3% rue 29.4%. N'iji ya tụnyere nsonaazụ afọ gara aga, nke ahụ bụ mmụba nke 61%. Ihe kachasị dị egwu bụ nsonaazụ arụmọrụ dị oke elu maka akwụkwọ akụkọ na-etinye bọtịnụ nkekọrịta mmekọrịta. Ozi ịntanetị ndị ahụ nwere nkezi pịa-site-ọnụego (CTR) 158%
Gini na eme ka ndi mmadu pịa… 72% More?
Dr. Todd's, saịtị e-commerce maka ngwaahịa nlekọta ụkwụ dị mma, tụgharịrị na SmallBox maka ngwugwu ahịa azụmaahịa omenala. Otu ihe dị mkpa nke ngwakọta ahịa nke Dr. Todd bụ ahịa email. Anyị mepụtara usoro ọdịnaya ọhụụ, imepụta ọhụụ ma wepụta kalenda ederede. Anyị enyochaala otu n'ime ozi-e nkwado nke Dr. Todd iji gosi ihe na-eme ka ndị mmadụ pịa ma gbanwee. Inye Ihe doro anya O nwere ike ịbụ na ị nụwo okwu ahụ bụ́ “imepụta iji ego eme egwuregwu” dị ka